Sky-yebhuruu parera rimwe Armenia - Lake Sevan
It achangobva kuva yakakurumbira zvitsva vashanyire kuenda: Armenia, Lake Sevan. Sununguka pamhenderekedzo rechirwere ichi anonzi vapfumi. The kamwe duku maindasitiri guta chete zita rwauya kuva dzakabudirira dzisina pamwe mumusasa site, private hotels, dzimba chebhodhingi, unodziya zvetsika resitorendi. Sevan akagadzirira kugamuchira vaenzi gore kumativi ose, asi yepamusoro mwaka Chokwadi, mumwedzi yezhizha.
Chii Lake Sevan (Armenia)? Photos tiratidzei zvinoshamisa, azure-yebhuruu mvura pamusoro, sokunge achizorora maoko marefu. Achiona nyanza ichi, lapidary Bamba Gorky akati: "Hungu, akanaka!" Asi chaiwo Armenian Avetik Isahakyan akati pamusoro zvinokwezva munyika: "The Sevan zvakadaro akanaka kuti munhu asingadi urombo iye uye kunyura." Zvechokwadi, mudumbu pegungwa twakawandawanda, nokuroya. Fresh gomo mhepo Anoshandura musoro, uye mvura inogona kuverengwa ibwe ose ari kudzika mamita gumi!
Asi maererano jogirafi pasi sayenzi, Lake Sevan ari kuputika mavambo. It yakaumbwa anenge 25 zviuru apfuura somugumisiro kuputika dzemabota Geghama apo nemabota akaita dzinongoitika dhamu murwizi Hrazdan. zita iri parutivi rwegungwa akaita kupi? In yaMakoronike yekare rakatumidzwa Geghama gungwa (Gegham CPC). Asi mugore 874 pamahombekombe ake zviviri machindakadzi Mariam Bagratuni Syunik uye akavaka wemamongi. Chivako rakavakwa rima tuff. "Black Monastery" - rinoshandurwa kubva Armenian-North Wank akapa zita uye mvura pamahombekombe iro achine, uye rinobuda.
Lake Sevan - a Highland. Its yakakwirira pamusoro pegungwa - 1896 mamita. Nokuda aienda mvura nzvimbo rakakamurwa Large uye Small Sevan, asi ari Geological, nenzvimbo uye utachiona mashoko mudziva rimwe. With kwayo kumavirira zvinovakomberedza Geghama makomo, kubvira kumaodzanyemba - Vardeniskie. Kuchamhembe uye kumabvazuva, uye kuwedzera Areguniysky Sevan neeSultan. Area mvura HPP kuvaka yakanga 1415 mativi makiromita, asi zvino wakaderedzwa kusvika 1 246 km 2. Nokuda shoaling chitsuwa chiduku matombo rakabatanidzwa yakaoma.
In mashoko Tourism Lake Sevan anopa vafambi kwete chete gomo sunbathing uye kushambira. Nenzira, pasi kumaodzanyemba zuva kuArmenia muna August mvura rematsutso kusvika 24 madhigirii, uye zviri anenge zviuru zviviri metres kubva kukwira! Beachgoers muri mijenya mvura mabasa: chitiviri magwa, catamarans, yacht uye mafaro magwa, Surfing uye mvura trampolines. Vazhinji hôtels vari vakapakata huru kupopotedzana dziva. Beach uye mvura nharaunda kwegungwa - uyu ndiye National Parks nemhuka tsvene. Asi akatendera uye hove. Makadzika kwegungwa zvinowanikwa Sevan Rainbow uye zvikurukuru raparurwa hove zvinokosha Ladoga whitefish.
Lake Sevan inofarirwa revashanyi muchando. Kuchamhembe chikamu chitsva the uyai akazarura pamusoro mawere. Pamahombekombe kwegungwa pamusoro pegomo inogona nomuongorori waya motokari uye kumisa kuti zororo, kushandisa zvizere zuva Skiing, hotera "Akhtamar 4 *." Kubva tenuka pakati resitorendi yake inopa hunoshamisa maonero dzomumakomo uye muchando pechiso rwegungwa. Uye kuti hwomutambarakede kumhenderekedzo zororo yakakodzera rokunyaradza hotera "Avan Marak Tsapatagh 4 *" uye "Blue Sevan 3 *."
Waterpark muna Abkhazia, Gagra
Attractions Tuapse dunhu: tsananguro uye mapikicha
Mudyandigere "The Odyssey" (Anapa)
Norwegian Park Nut: kero, makwara, wongororo. "Norwegian Walnut Park" - chikuru tambo Park mu Russia
Verhnemakarovskoe Dam: tsananguro Dam
Attractions Syzran: Photo uye tsananguro
Mhepo kuyerera mita. Supply mhepo flowmeter
Kutumira muimba. Nzira yekuiisa nayo
Pasynkovanie wemagaka - kuwedzera imwe chirimwa
In pakutapwa tsitsi: chii tsitsi
Jekiseni Aloe - zvizoro kumba
Strawberry matanda: kushandiswa mavhitaminzi
Mabatirwo hepatitis C Indian zvinodhaka: vanachiremba wongororo
"Volga-Akhtuba floodplain" Natural Park: sei kuti ikoko? Photos, tsananguro
Sezvo achikura mazamu uye chii kudya kuitira kuti akurudzire izvi?
"Chikwata cheLatin" - resitorendi muMoscow: photo nekudzokorora
Chii kukura Nyusha? Biography kuti muimbi
Just pamusoro zvinodhaka "Octreotide": mirayiridzo varwere